Fifanakalozana ara-kolontsaina : Mivahiny any La Réunion mandritra ny roa herinandro ny Malagasy Gospel
04/04/2018 admintriatra 0
Antoko mpihira avy amin’ireo fianakaviana sahirana any Toliara. Ao anatin’ny hetsika fifanakalozana ara-kolontsaina, dia mivahiny any amin’ny Nosy La Réunion mandritra ny roa herinandro ireo mpikambana ao amin’ny Malagasy Gospel. Antoko mpihira ahitana mpikambana tovovavy …Tohiny
Vidin-tsolika : Nandray andraikitra ny Fitondram-panjakana
Tsy nitazam-potsiny ny Fitondram-panjakana fa avy hatrany dia nandray ny andraikitra tandrify azy manoloana ny fiakaran’ny vidin-tsolika tampoka tao anatin’ny andro fety. Marihina mantsy fa niakatra 90 Ar be izao ny vidin’ny solika tamin’iny andro …Tohiny
Fetin’ny paska : Olona 151 no voasambotry ny polisim-pirenena
Tamin’ny ankapobeny, dia azo lazaina ho nilamina ny faran’ny herinandron’ny paska teto an-drenivohitra sy ny manodidina. Samy nandray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay avy ka vitsy ny namoy ny ainy, nihena ireo naratra sy …Tohiny
Basy saika hamidy : Nahafaty tsy nahy zazavavikely iray
Voatifitra tsy nahy teo amin’ny faritry ny fony ny zazavavy kely iray, izany dia vokatry ny fivarotana basy tsy ara-dalàna nataona ramatoa iray tao amin’ny kaominina Betafo. Mpanangom-bokatra ao Betafo no voalaza fa tena asan’ilay …Tohiny
Carlton Anosy : Nohorakorahan’ny olona Rajoelina
Tofoka sy leo ny fitapitaka sy ny fampanantenana poakatin’i Andry Rajoelina ny olona. Araka izany, raha nanatanteraka ny fampahafantarana ilay IEM tetsy amin’ny Carlton Anosy ingahy Andry Rajoelina sy ny ekipany omaly, avy hatrany dia ...Tohiny
Iavoloha : Teraka ny governemantan’ny fisokafana
Fisandratan’ny firenena : Tsy ekena intsony ny korontana
Fanjakana gasy : Tandindomin-doza ny fifidianana
Taranja kickboxing – Tompondakan’i Afrika : Nahazo fankasitrahana avy amin’ny Filoham-pirenena